စိတ်ကူးရင် – Grab Love Story
ကောင်းကင်မှ မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ် ကြယ်များကိုကြည့်ရင်း ငြီးငွေ့စရာ ကောင်းလှသော ပင်လယ်ပြင်ကြီးအား နောက်ထပ် ခြောက်ရက်ခန့်မျှ သူစီးရဦးပေတော့မည် ယခုတာဝန်အားပေစေသော ရဲချုပ်ကြီးအား မင်းမင်း တယောက် စိတ်ထဲမှ ကြိမ်ဆဲနေမိတော့သည် သူ ရဲထဲဝင်ခဲ့သည်မှာ ဖာ များ မာဆက်မှဆော်များအား အမြဲမပြတ်လိုးရန်အတွက်ပင်ဖြစ်သည် သူလိုးခဲ့တဲ့ ဆော်တိုင်းလည်းသူအားအစွဲကြီးစွဲလမ်းသွားကြသည် စွဲသွားအောင်လည်း လိုးနည်းပေါင်စုံ သူကျွမ်းကျင်သည်မဟုတ်ပါလား သူ့အရပ်မောင်းမှာ ခြောက်ပေရှိကာ အားကစားလိုက်စားသောကြောင့် ရင်အုပ်ကြယ်ကာ ယေက်ျားပီသကာ အသားရည်မှာလည်း မညိုသော်လည်း ဖြူသည့်ဘက်မပါချေ အထူးခြားဆုံးက ၇ လက်မခန့်ရှည်သော သူ့လီးပင် လုံးပတ်မှာ လက်မနှင့် လက်ခလယ်ပင် မထိချင် ထိုမျှကောင်းလွန်းသော သူ့လီးအား ခံဖူသူတိုင်းစွဲလမ်းသွာတာ မဆန်းပေ အခုရက်ပိုင်း အလုပ်တွေရှုပ်နေသောကြောင့် မလိုးရသည်မှာ ကြာခဲ့ချေပြီ ယခုလည်း ဆရာသမား သမီးချော ၂ ယောက်အား ကိုယ်ရံတော် တပ်မှူးအဖြစ် သူတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပေတော့သည် Sky Blue ခရီးသည်တင် သင်္ဘောကြီးသည် တရွေ့ရွေ့ဖြင့် ပင်လယ်ပြင်တွင်ခုတ်မောင်းလျှက်ရှိသည် ခရီးမှာရှည်လွန်းသောကြောင့် စားသောက်ဆိုင်အပြင် အရက်ဘားပါ ရှိလေသည်။
သင်္ဘော၏ အောက်ဆုံးထပ်တွင် သာမန်လူတန်းစားများ လိုက်ပါစီးနင်ပြီး အလယ်ထပ်တွင်လည်း စားသောက်ဆိုင်နှင် ရိုးရိုးအိပ်ခန်းငယ်များပါရှိသည် အပေါ်ဆုံးထပ်တွင်တော့ အထက်တန်းလွှာများသာ စီးနင်းနိုင်သော အထူးအိပ်ခန်းတွဲများနှင့် သက်တောင့်သက်သာ အနားယူကာ ပင်လယ်လေညှင်းခံရန် ထိုင်ခံတန်းလျှားများ အခန့်ရှေ့တွင်ရှိလေသည် မင်းမင်းတယောက် ရေမိုးချိုးကာ အောက်ထပ်ရှိ စားသောက်ဆိုင်သို့ ထွက်လာခဲ့သည် လက်ရန်းဘေးရှိဦးဘက်မျက်နှာမူသောခုံတွင် ဝင်ထိုင် ဘီရာနှင့် ဝက်ပေါင်ခြောက်မှာယူစားသောက်နေတော့သည် အချိန်အားဖြင့် ၇နာရီကျော်လာကာ လေတဖြူးဖြူးနှင့် ဘီရာမှာ သောက်၍အလွန်ပင်အရသာရှိလေတော့သည် တဖြေးဖြေးနှင့် ညစာစားချိန်မို့ လူများစည်ကာလာကာ ထိုင်စရာခုံပင် မရှိတော့ချေ ထိုအချိန်တွင် မမ ကိုညီမလေးပြောသားပဲဟု စောစောထွက်စားကြရအောင်ပါဆိုနေမှ ဟုမည်တွန်ရင်း စာပွဲအလွတ်အားပြေးလွှာရှာနေမိတော့သည် ကဲ ခုမှဖြင့်မထူးတော့ပါဘူး ဟုပြေားလည်းပြောရင်း မင်းမင်းခုံရှေ့ရောက်လာကာ ကိုမင်းမင်းထိုင်မယ်နော်ဟု ပြောရင်းအစ်မဖြစ်သု လဲ့လဲ့ လက်စွဲရာမှ လွှတ်ကာ သူနှင်မျက်နှာချင်းဆိုင်ခုံတွင် ဝင်ထိုင်လေတော့သည် အစ်မဖြစ်သူလဲ့လဲ့မှာ မတတ်သာသည့်အဆုံး ဝင်ထိုင်လိုက်ရတော့သည် မင်းမင်းအား သူမ သိပ်သဘောမကျချေ မင်းမင်းအကြည့်များမှာ ရဲတင်းကာ သူမအားကြည့်သည်မှာ စားမတက်ဝါးမတက်ပင် အေးဆေးတည်ငြိမ်သူမို့ ထိုအကြည့်များကိုမကြိုက်ခြေ အငယ်မ စုစု ကဖြင့် ထိုအကြည့်များကို ဂရုမစိုက်ပေ သူမအတွက်ထိုအကြည့်များထက်ပိုဆိုးသော ချစ်သူ၏ မျက်လုံးရှေ့မှာ တကိုယ်လုံးပင်ချွတ်ကာ ချစ်ရည်လူးခဲ့သည်မှာ လေးငါးဆယ်ကြိမ်မျှပင်မကချေ စုစု သည် လဲ့လဲ့ထက် အသက် သုံးနှစ်မျှ ငယ်သော်လည်း ခန္တာကိုယ်ကား အစ်မဖြစ်သူထက်တောင့်တင်းကာ အချိုးစားပြေပြစ်လှပေသည်။
လုံးဝန်းနေသော သူမတင်သားများမှာ ဘာဝတ်ဝတ်လှပကျော့ရှင်းနေပေတော့သည် ရင်သားများမှာ ငယ်ရည်းစားနှင့် ယခုချစ်သူ လက်သရမ်းမှုများကြောင့် ပြည့်ဖောင်းကာ ဘော်လီနှင့်ပင် မဆံချေ မျက်နှာမှာ ပြည့်ဝင်းကာ တင်ပါးနားထိရှည်လျားသော ဆံနွယ်များကြောင့် မြန်မာဆန်ဆန်ဝတ်လျှင် ပုရိသတို့၏ မျက်လုံးများအာသိမ်းပိုက်ကာထာတော့သည် ယခုလည်း ဆိုင်အတွင်းမှ လူအများစုသည် သူမအား ဂေါ်တော်တသိန်းအားမျက်လုံးများဖြင့်ကြည်နေသည်မှာ ဟန်ပင်မဆောင်နိုင်ကြခြေ ကိုမင်းမင်း က ဘီရာသောက်နေတာလား ဒါဆို စုစုလည်းသောက်မယ်လေ ဟုပြောရင်း မှာလိုက်လေသည် အစ်မဖြစ်သူမှာ တားချိန်ပင်မရလိုက် ညီဖြစ်သူ တဇွတ်ထိုးဆန်သောကြောင့် တားလည်ရနိုင်မည်မဟုတ်သောကြောင့် အတင်းမတားတော့ပေ သူမက ထမင်းနှင့်ဟင်းပင်မှာယူလိုက်သည် မင်းမင်သည် ရှေ့တော်မှောက်ရောက်ရှိလာသော အထက်လူကြီးသမီးနှစ်ယောက်အားကြည့်ရင်း လီးမှာတဖြေးဖြေးတောင်လာတော့သည် ရဲမို့ပင်လားမသိ အမြင်မှာစူးရှကာ စုစုသည် အဖြူနှင့်အနက်ပန်းနွယ်လေးများပါသော ဂါဝန်အရှည်အောက်တွင် ဘာအတွင်းခံမှ ဝတ်မထားကြောင်း နို့သီးခေါင်းလေးများမှာသက်သေပြနေပေတော့သည် ခေတ်လူငယ်ပေမို့ အိမ်နေရင်းပုံစံနှင့်ပင် ညစာထွက်စားခြင်းဖြစ်မည် အကြီးမသည် သူနှင့်ရွယ်တူလောက်ပင် ရိုးအေးကာအရှက်ကြောက်ကြီးမည့်ပုံပင် အချိုးစာမှာ အငယ်မလောက် မထွားဖွင့်သော်လည်း ကြည့်ကောင်သည့်အဆင်တွင်ရှိသည် ကျမတို့က တခရီးတည်းသွားသူတွေပဲ မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ်ပေါ့ လာချီးယာစ်း ဟုစကားစကာ မင်းမင်းနှင့် စကားအစပျိုလေတော့သည် တောင်နေသောလီးအား ပေါင်အောက်တွင်ခုံနှင့်ညှပ်ကာ ဟန်မပြတ်စကားပြောလာကြရာ အတော်ပင်ရင်းနှီးလာတော့သည် စုစုလည်း ဘီရာနှစ်လုံခန်ကုန်လာသောအခါ စိတ်များထကြွလာတော့သည် မင်းမင်းအားမသိမသာ ရေလာမြောင်းပေးစကားများပြောလာတော့သည် နဂိုတည်းက အထန်ကောင်သူအဖို့ ရေငတ်တုန်းရေတွင်းထဲ ကျသလိုပင် စကားနည်းလှသော လဲ့လဲ့မှာ သူ့အားကြည့်ကာ မျက်မုန်းကျိုးးနေမိတော့သည် သူ့အား ဘုကြည့်ကြည့်နေသော လဲ့လဲ့ကြောင့် စိတ်မှာမရိုးမရွဖြစ်ကာ အတင်းပင်စွဲလုံးချင်စိတ်ပင်ပေါ်မိတော့သည် နေနှင့်ဦးပေါ့ကွာဟု ငြိုးတေးကာထားတော့သည် စားသောက်ပြီးသောအခါ ကျသင့်ငွေရှင်းကာ အခန်းသို့ပြန်လာခဲ့ကြသည် အခန်းချင်မှာကပ်လျှက်ဖြစ်သောကြောင့် မိန်းမချေားလေနှစ်ယောက်၏ နောက်ပိုင်းအလှများအားငေးကာ လျှောက်နေမိတော့သည် အခန်ဝရောက်လျှင် မင်းမင်းအား နှုတ်ဆက်မည်ဟု နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ရာဝယ် ဘောင်ဘီးကြားမှ ဖု့ဖောင်းနေသော မင်းမင်းလီးအား စုစုတယောက်မြင်မိရာဝယ် ထကြွနေသောစိတ်ကြောင့်ပို၍ပင်ထန်လာမိတော့သည်။
နှုတ်ဆက်ရင်း အခန်းတံခါးပိတ်ကာ ဝငအိပ်ကြလေတော့သည် မင်းမင်းမှာသာ တောင်မတ်နေသောသူ့လီးအား ကိုင်ရင်းအခန်းရှေ့ ထိုင်ခုံတွင်လေညှင်းခံရင်း စီးကရက်သောက်နေမိတော့သည် မည်မျှကြာအောင် ငေးမောမိသွားသည်မသိ ပုခုံးအား လာပုတ်သောလက်တဖက်ကြောင့် ဆုပ်ကိုင်ထားသောလီးအား ကပျာကယာလွတ်ရလေသည် လှည့်ကြည့်ရင်း စုစု မအိပ်သေးဘူးလားဟု မေးရာ အိပ်မပျော်ဘူး ကိုမင်းမင်းရာ ဟုပြောရင်းဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်လေတော့သည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးစကားမပြောပဲ မျက်လုံးခြင်ဆုံစည်းရာဝယ် စုစု ဘာလိုအပ်နေသည်ကို ချက်ချင်းသဘောပေါက်ကာ ခါးလေးအားမိမိအနား ဆွဲဖတ်ကာ အနမ်းမိုးများရွာသွန်းနေမိတော့သည် မိမိ နှုတ်ခမ်းတစုံ အားမွတ်သိပ်စွာနမ်းယူနေသော မင်းမင်းအထိအတွေ့မှာ ရစ်မူးသာယာနေမိတော့သည် လက်တဖက်မှာလည်း ရွှေရင်အစုံအား ဆုပ်နယ်ကာ ကာမသော့ခလုပ်လေးများအား တဆင့်ပြီးတဆင့်ဖွင့်နေမိတော့သည် မင်းမင်း၏ ကျွမ်းကျင်လှသော အထိအတွေ အကိုင်အတွယ်များမှာ စုစုအဖို့ တိမ်တိုက်များပေါ်လွင့်မျေားနေသူတယောက်ပမာပင် အားးး ကိုမင်းရယ် အရမ်းလုပ်တတ်တာပဲဟု ညုတုတု ပြောလေရာ ဒါတောင်အများကြီး ကျန်သေတယ် မယုံပေါင် ဟု ဆွပေးလိုက်လေရာ လာ လက်တွေ့ထပ်ပြမယ် အခန်းထဲသွားရအောင်ဟု ခါးမှဖတ်ကာ မိမိအခန်းတွင် ခေါ်ဆောင်လာခဲ့တော့သည် အခန်းတွင်းရောက်သော် စုစု ဂါဝန်ဝမ်းဆက်လေးအား ခေါင်မှဆွဲချွတ်လိုက်ရာ မိမွေးတိုင်း အလှလေးများပေါ်လွင်လာတော့သည် ကုတင်ပေါ်သို့ ပက်လက်လှန်စေပြီး နိုးနှစ်လုံးအား အားရပါးရပင်စို့ချေတော့သည် အစို့ကြမ်းကြမ်းများကြောင့် နို့သီးခေါင်လေးများထောင်ကာ ရွှေကြုတ်အတွင်းမှ ကာမရှေ့ပြေးအရည်ကြည်လေးများ တစက်စက် ယိုစင်းလာတော့သည် မင်းမင်းသည်လည်း စိတ်ရှည်တတ်သူမို့ နို့စိုးရင်း ပေါင်တွင်သားများအား စုန်ဆန်ကာ ပွတ်သတ်နေရာ စုစုမှာ မရိုးမယွပင်ပို၍ ဖြစ်လာလေတော့သည် အထက်မှ အောက့်သို့တဖြည်းဖြည်းဆင်းလာရာဝယ် စုစု စောက်စိလေးအား လျှာထိပ်ကလေးဖြင့် ဆွပေးလိုက်ရာ လက်နှစ်ဖက်မှာ မင်းမင်းခေါင်းအား ဖိကာခါးမှာအထက်သို့ ကေ့ာတင်ပေးနေမိတော့သည် နှုတ်မှာလည်း အား အားး ရှီး အားး ဟု စိတ်လို လက်ရငြီးတွားနေမိတော့သည် လျှာပြားကြီးမှာအထက်အောက်စုန်ဆန်ပွတ်ရင်း အတွင်းထဲထိ ထိုးဝင်မွှေနှောက်ပေးနေတော့သည် အားး အားး ရှူး ရှီးဟု မည်တွန်ရင်း ကိုမင်းရယ် လီးကြီးနဲ့လိုးပေးပါတော့ဟု တောင်ပန်ရင်းတဖွဖွ ပြောနေမိတော့သည် သူလည်းစိတ်တအားထန်လာကာ စုစု စောက်ရည်များအား ကုန်စင်အောင်ယက်ယူ မြိုချနေမိတော့သည် ငါးမိနစ်ခန့်ထပ်မံ စုပ်ယူပြီး မတ်တပ်ထရပ်ကာ မိမိကိုယ်ပေါ်က အဝတ်များအားဖယ်ရှားပြီး စုစုမျက်နှာနားသို့သွားကာ သူမပါးအားထောင်မတ်နေသောလီးနှင့်တဖတ်ဖတ်ရိုက်ရာဝယ် တခါပြီး၍မှိန်းနေသောစုစု မှာ မျက်လုံးများဖွင်ကာ မြင်လိုက်ရသောလီးကြောင့် တံတွေင်းများပင်မနည်းမျိုချလိုက်ရသည်။
ကြီးလိုက်သည့်လီးမှာ မိမိကြည့်ဖူးသော အပြာကားများထဲမှ နီဂရိုးလီးလောက်ပင် ရှိလိမ့်ဟု စိတ်မှတိုင်းမိကာ မိမ ဖုတ်ဖုတ်နှင့်ဆန့်မျှဆန့်မည်လောဟု စိုးရိမ်မိသွားလေတော့သည် နှုတ်ခမ်းဖူးလေးအား အလျှားလိုက်ပွတ်သတ်ရင်း ဒစ်ဖျားအား စုစုပါစပ်ထဲ အတင်းပင်ထိုထည့်လိုက်မှသာလျှင် ရောင်ရောင်မှားမှားနှင့် သူမဟပေးလိုက်သော ပါစပ်ထဲသို့ဝင်လာသောလီးမှာ လည်ချောင်ထိပင်ရောက်ရှိသွားတော့သည် အု့ အု့ ဟု အသံထွက်လာသောကြောင့် သူမသီးသွားမှန်းသိကာ အသာယာပင်ပြန်ထုပ်ပေးရင်း ဆေားရီး ကိုယ်နည်းနည်းလောသွားလို့ဟု တောင်းပန်ရာဝယ် ရပါတယ် ညီမနည်းနည်း အံ့သြောသွားလိုပါဟု ပြေားရင်းကုတင်အောက်သိုဆင်းကာ မင်းမင်းလီးအား အားရပါးရ ကိုင်စုပ်နေတော့သည် . လဲ့လဲ့ မှာ တရေးနိုးသောအခါဝယ် ဘေးတွညီမဖြစ်သူအားမတွေ့သောကြောင့် စိုးရိမ်ကာလူးလည်းထရင်း အိမ်သာထဲများမူးပြီးလည်းနေသည်ဟု ထင်ကာ အခန်ဖွင့်ကြည်ရာဝယ် မတွေ့သောကြောင့်စိတ်ပူကာ ဘေးအခန်းမှ မင်းမင်းအား နှိုးမည်ဟု စိတ်ကူးကာ အခန်းရှေ့ရောက် တခါးခေါက်ဖို့လက်အမြှောက်တွင် ဟ နေသောတံခါးကြားမှ မြင်လိုက်ရသောမြင်ကွင်းကြောင့် အံ့သြမှင်သက်စွာငေးကြည့်နေမိတော့သည် မိမိသည် ဤကဲ့သို့သော အဝတ်မပါ မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်း ကိုယ်ဗလာနှင့်ယောက်ျားတယောက်အားတခါမျှမမြင်ဖူးခြေ ကြက်သီးမွှေးညှင်များပင်ထကာ မျက်လုံအားမခွာပဲ ဆက်လက်ငေးကြည့်နေမိတော့သည်။
ကြီးလိုက်တဲ့လီး စုစု အာခေါင်ထောက်သည်အထို ငုံထားတာတောင်မှ အပြင်မှာ လက်ဆုပ်လောက်ကျန်နေသေးသည် မြင်းလီးကြီးကျနေတာပဲဟုစိတ်မှရေရွတ်လိုက်မိသည် ။ စုစုသည် သူ့ချစ်သူ သင်ပေးထားသော ပုလွေပညာအား အစွမ်းကုန်ထုပ်သုံးနေသောကြောင့် မင်းမင်းမှာ ခေါင်ကို အပေါ်သို့မော့ကာ နှုတ်မှာလည်း ငြီးညူးနေမိတော့သည် အား အားး မရတော့ဘူးစုစု ထ ထတော့ဟုပြေားရင်း လီးအားစွဲထုပ်လိုက်တော့သည် စုစုလည်း အသာအယာပင် ကုတင်ပေါ်သို့ တက်ကာ ဖင်ပူးတောင်ထောင်ပေးလိုက်တော့သည် မင်းမင်းလည်း သုံးလေးချက်မျှ ပိပိလေးအား ပွတ်ကာ အရည်ရွှဲနေသောကြောင့် အသာအယာပင်ထိုးထည့်ရာ ထက်ဝက်ခန့်ပင်ဝင်သွားလေတော့သည် အားးး ကိုကို အရမ်းမသွင်းနဲ့ အထဲမှာအရမ်းကြပ်နေတယ် အင်း စုစုလေး ကိုကို ဖြေးဖြေးချင်း ချော့လိုးပေးမယ်ဟုပြောလေသည် အား ကျွတ် ကျွတ် အားး ရှီးးး အားးး အာ့ အာ့ ၏်းတွားရင်းပင် အဆုံးထိဝင်သွားရာ ပြည့်ကျတ်လွန်းနေသောကြောင့်မင်းမင်းမှာ ပြန်မထုတ်သေးပဲ အသာပင်ဇိမ်ခံနေတော့သည် တဆုံးထိဝင်နေသောလီးကြောင့် ကလီစားများပင် ကပြောင်းကပြန်ဖြစ်နေသလားဟုထင်မှတ်ရလောက်ပေသည် ညှစ်အားများကြောင့် အရည်ကြည်လေးများမှာ စိမ့်ကာစိမ့်ကာပင် ထွက်နေမိတော့သည် မင်းမင်း လည်းလီးတန်အား သုံးပုံ တစ်ပုံခန့် ဆွဲထုတ်ပြီး ပြန်လည်လိုးညှောင့်နေမိတော့သည် အမလေးးးး အားးးး အားးးး ကောင်းလိုက်တာကိုမင်းရယ် ရင်ထဲကိုပြည့်သွားတာပဲ စုစု ခံနိုင်နေပြီသိလား အဆုံထိထုတ်ပြီး လိုးပေးပါတော့ဟု ငြီးတွားရင်း တဖွဖွပြောလေရာ ခါးနှစ်ဖက်အား စုံကိုင်ကာ အဆုံးထိထုတ် အဆုံးထိသွင်း ပုံမှန်လုပ်နေတော့သည် အားး ရိုးးး အားးးးရှီးးးး အားးး အု အု အွန့် ဗတ် ဗတ် အွန့် …ဗက် ….အု့….အွန်းးး…အားးး.အော်မြည်းရင်း ဖင်လေးကော့ကာ ကော့ကာ ခံနေသော ညီမဖြစ်သူအား ကြည့် လဲ့လဲ့ ဖင်စအိုက ပင် ယွစိတက်လာတော့သည် ပိပိလေး ထဲမှ အရည်များမှာလည်း အတွင်းခံတခုလုံးစိုရွှဲကာ ဒူများပင်မသယ်ချင်တော့ပေ ။ ကောင်းလွန်သောကြောင့် အားရပါးရပင် နှစ်ဦးသား ပုံစံအမျိုးမျိုး ပြေင်းလိုးနေကြသည် စုစု ခဗျာ သုံးခါမြောက်ပြီးသောကြောင့် မင်းမင်းအားကျောမှသိုင်းဖတ်ကာ ကော့ကော့နေသော အရှိန်ကြောင့် လီးထိပ်မှာ ကျင်တက်လာကာ စုစု သားအိမ်ထဲသို့ကုန်စင်အောင်ပန်းထုပ်လိုက်လေတော့သည် စုစုမှာလည်း ဝင်လာသော ခပ်နွေးနွေး လရည်များကြောင့် ကုန်ခမ်းနေသော အားများ ချက်ချင်ပင် ပြန်လည်ပြည့်ဝလာကား နွမ်းနယ်နေသော မင်းမင်းလီးအား စိမ်ထားသောအဖုတ်မှ ထုပ်ကာ ရေမဆေးတော့ပဲ ကုန်းစုပ်နေတော့သည် ။
လဲ့လဲ့ သည် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် လိုးပွဲအားမြင်ဖူးလိုက်သည်နှင့် အလိုးခံချင်စိတ်များ တားမရဆီးမရ ဖြစ်ကာ မင်းမင်းလီးအား အာရုံတွင်းမှ ဖျောက်ဖျက်မရဖြစ်နေတော့သည် အခန်းတွင်းသို့ပြန်လာကာ အိပ်ယာထက်တွင်း မျက်လုံးအားမှိတ်ကာ စောစောပုံရိပ်အား မြင်ယောင်ကာ ဘောင်းဘီကြားလက်နှိုက်ကာ အစိလေးမှာ ခံလို့ကောင်းကောင်းနှင့် ပွတ်နေလိုက်သည်မှာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ပြီးဆုံးခြင်းသို့ ရောက်လေတော့သည် အားးး ကောင်းလိုက်တာ ငါ ဒါကိုဘာလို့ အစက ကြိုမသိခဲ့တာပါးလည်း ဟု မိမိကိုယ်ကို အပြစ်တင်ဝေဖန်နေမိတော့သည် ကောင်းလွန်းသောကြောင့် ဘောင်းဘီက လက်ပင်အပြင်သို့မထုပ်နိုင်ပဲ အိပ်ပျော်သွားလေတော့သည် ။ စုစု ထပ်မံ စုပ်ယူပေးသော အရှိန်ကြောင့် လီးမှာ ခဏတွင်းပင် ပြန်လည်တေင်မတ်လာတော့သည် ဆယ်မိနစ်ခန့် စုပ်ယူပေးပြီးနောက် သူမသည် မိမိအပေါ်သို့ ကားယားခွကာ လီးအရင်းမှကိုင်ကာ အဖုတ်ဝတွင်တေ့ကာ ထိုင်ချလိုက်တော့သည် အားး ကောင်းလိုက်တာ စုစုလေးရယ် ဟု ပြေားရင်း နှစ်ဦးသား စည်ချက်ကိုက်စွာ ကော့စောင့်နေတော့သည် စုစုမှာ လီးပေါ်တက်ကာ စောင့်နေသောကြောင့် အစိလေးမှာ လီးနှင့်အချိန်ပြည့်ပွတ်မိနေသောကြောင့် များမကြာမီပင် တခါပြီးသွားပြန်သည် မင်းမင်းသည် စုစုအား ခြေနှစ်ချောင်းစုံထမ်းကာ အားရပါးရ လိုးကာ ကာမသုခကို နှစ်ဦးသား ဒင်ပြည့်ကျပ်ပြည့် ခံစားနေမိတော့သည် ။ အား အိုး .. ဟင်းး…. အားးး……… ဗွက် …ဖတ်..ဖတ်..ဗွက် ဗွတ်… အားး.းး..ရှီး….စူးးး…အားးး.အွန့်….. အချက်းလေးဆယ်ခန့် မရပ်မနား လိုးဆောင့်မှု့ကြောင့် နှစ်ဦးသား ကာမပန်းတိုင်သို့ ပြိုင်တူပင် တက်လှမ်းနိုင်တော့သည် စုစုသည်လည်း မင်းမင်း ရင်ခွင်ထဲမှာပင် မောပန်စွာ အိပ်ပျော်သွားလေတော့သည် မင်းမင်းသည် ဆေးလိပ်သောက်ချင်လာသောကြောင့် အဝတ်များဝတ်ဆင်ကာ တံးခါးဝသို့ လျောက်လာရာ တံခါးမှာ အနည်းငယ်ဟနေသောကြောင့် မသင်္ကာဖြစ်ကာ ဘေးဘီအားလှည့်ကြည်ရာ ထူးခြားချက်တစုံတရာမှာမတွေ့ချေ ထို့ကြောင့် စီးကရက်အား မီးညှိရင်းစဉ်းစားလေရာ အတန်ကြာမှ အသိတခုဝင်ကာ လဲ့လဲ့အိပ်နေသော အခန်းအား တံခါးလော့မချထားသောကြောင့် အသာလှပ်ကာ ချောင်းကြည့်ရာဝယ်အတွင်းခံထဲလက်နှိုက်လျှက်အိပ်ပျော်နေသော လဲ့လဲ့အား တွေချိန်တွင် သူ့မျက်လုံးများ အရောင်တောက်ပသွားတော့သည် လဲ့လဲ့ တယောက် အိမ်မက်ထဲသို့ နတ်သားလေးတပါးရောက်ရှိလာတော့သည် ထိုနတ်သားလေးမှာတော့ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဇတ်လိုက်ကျော်ကြီး မင်းမင်းပင်ဖြစ်လေသည် ကနဦးတုန်းက သူမမှာ သူ့ကိုကြည့်မရချေ စုစု နှင့်ချစ်ရည်လူး ကာ သူ့လီးကြီးအားမြင်ကတည်းကပင် တိတ်တခိုးစွဲလမ်းသွားတော့သည် နတ်သားလေးမှာ သူမအားငုံ့၍ကြည့်နေသည်။
သူမရှက်လိုက်သည်မှာ မပြောနှင့် သို့သော် ပြန်ထွက်သွားမှာစိုး၍ တင်းကြပ်နေအောင်ဖတ်ထားမိတော့သည် နတ်သားလေးမှာ သူမအား နှဖူးလေး မြတ်နိုးစွာနမ်းလိုက်သည် ပျော်လိုက်သည်ဖြစ်ခြင်း မျက်လုံးလေးအသာမှေးကာ အနမ်းများအားကျေနပ်စွာ ခံယူနေမိတော့သည် ပါးလေးနှစ်ဘက်နမ်းကာ သူမနှုတ်ခမ်းလေးအား ငုံကာနမ်းရာ နွေးထွေးလွန်းသောကြောင့် ခါးလေးပင်ကော့မိရာ နတ်သားလေးမှာ သူမကျောအောက်မှ ဘောလီချိတ်များအား လျှင်မြန်စွာပင်ဖြုတ်လိုက်လေတော့သည် နှုတ်ခမ်းလေးအား အဆက်မပြတ်နမ်းနေရင်းမှ သူမလည်တိုင်လေးအား လျှာဖျားလေးနှင့် ကလူကျီစယ်လိုက်ပုံမှာ ကောင်းကင်ပေါ်လွင့်မျေားနေသယောင်ပင် အိုးးး ချစ်လိုက်တာ နတ်သားလေးရယ် မိမိ တသက်လုံးနေမထိ လေမထိ ထိမ်းသိမ်စောင့်ရှောက်လာသော ရွှေရင်အုံလေးမှာ လေစိမ်များထိတွေ့မှုကြောင့် အိပ်ပျော်နေရာမှ ရုတ်တရက် လန့်နိုးလာသော လဲ့လဲ့ မှာ ဟင် နင် နင် ဒါဘာလုပ်တာလည်း ဟုပြေားရင်း အပေါ်သို့လိပ်တင်နေသော အင်္ကျီအား အတင်းပင်စွဲချကာ ဖုန်းဖိနေတော့သည် ဒါ ဒါ ဆိုစောစောက အိမ်မက်မဟုတ်ဘူးပေါ့ အေးဟုတ်တယ် ဟု မင်းမင်း မှပြောလိုက်ရာ လွှတ် လွှတ် ငါ့ကိုခုလွှတ် မလွှတ်ရင်ငါအော်လိုက်မှာနော် မင်းမင်းမှာ အေးဆေးစွာ အော်ပေါ့ နင်အရှက်ပိုကွဲသွားမှာပေါ့ နင်ရယ် နင့်ညီမရယ် ငါ့လီးစုပ်နေတဲ့ပုံတွေ ငါ online မှာတင်လိုက်မှာပေါ့ ဟုပြောလိုက်ရာ လဲ့လဲ့ မှာစောက်တည်ရာမရဖြစ်ကာ မိမိ ဖခင်မှာ သာမန်လူမျိုးမဟုတ်မှန်း နာလည်ကာ ချုံးပွဲချငိုကာ ဆက်မလုပ်ရန် တောင်းပန်နေတော့သည် မင်းမင်းလည်း မိမိဆင်ထားသောဂွင်ထဲ တိုးဝင်လာပြီမို့ အေး ဒါဆို ငါတို့အပေးအယူတခုလုပ်မယ် ခရီးဆုံးလို့ ဆိပ်ကမ်းပေါ်ရောက်သည်ထိ နင်တို့ညီအစ်မ ငါ့မယားလုပ်ရမယ် ငါခိုင်းသလို သေသေချာချာ မလုပ်ရင်တော့ လူတကာတံထွေးခွက်ထဲ နင်တို့တမျိုးလုံး ပက်လက်မျေားပေတော့ ဟုပြေားရင်း မိမိ စောစောက ရိုက်ထားသောပုံများအား ပြလိုက်လေရာ လဲ့လဲ့ မှာ မိမိတသက်လုံးမောက်မာ ရိုင်းစိုင်းကာ ရင့်သီးစွာပြောဆိုဆက်ဆံခဲ့ပုံများအား ပြန်ပင်မြင်ယောင်ကာ မျက်ရည်များပင် ကျလာတော့သည် ကဲ ဘယ်လိုလည်း နင်လက်မခံဘူးဆိုလည်း စုစု နဲ့ပဲသွားပြန်အိပ်တော့မယ် မ မ လုပ်ပါနဲ့ ဟု ထစ်ငေါ့စွာ ဓက် ဓက် ဓက်ပုံတွေက တကယ်ဖျက်မှာလား ဟု တုန်ယင်ထစ်ငေါ့စွာမေးရာ မင်းမင်းက ပြုံးရွှင်စွာပင် ဖုန်းပါ မင်းကိုပေးလိုက်မှာ ဟုတ်ပြီလား တ တ တကယ်နော် တကယ်ပါဆို အချစ်လေးကလည်း ဘာအချစ်လေးလည်း လူကိုအကြပ်ကိုင်ပြီတော့ မတတ်သာလို့ပါကွာ ငါက နင့်ကိုမြင်ကတည်းက လိုးချင်နေတာ ဟာ ဘာတွေလာပြောနေတာလည်း ဟု ရှက်သွေးများဖြာကာ စောစောက ရုန်ကန်ခဲ့တာကိုပင် မေ့များသွားလားမသိ သြော် မိန်းမတွေ မိန်းမတွေ ဟုတွေးရင်း နို့နှစ်လုံးအား အားရပါးရပင် စို့နေတော့သည် လက်တစ်ဘက်မှာ ထမိန်အား အသာပင်ချွတ်ရာ ပြည့်တင်းနေသော လဲ့လဲ့ဖင်ကြီးကြောင့် ချွတ်မရပေ ဆက်မချွတ်သေးပဲ အနီရောင်ပင်တီလေးပေါ်မှ ဆီးခုံလေးအား ပွတ်သပ်ကာ နို့နှစ်လုံးအား အငမ်းမရပင်စို့နေတော့သည် လဲ့လဲ့ မှာ အိမ်မက်ထဲကလိုပင် ကောင်းကင်သို့လွင့်မျောကာ တိမ်တိုက်များအားဖမ်းဆုပ်ဖို့ ကြိုးစာနေတော့သည်။
အချိန်တန်ပြီဟု ယူဆကာ ကဲ ကောင်မ ဖီးတပ်မနေနဲ့ ထ ထ ရုတ်တရက် နို့များလှိမ်နေအောင်စို့ခြင်းမှရပ်ကာ ခပ်ရိုင်းရိုင်း ပြောလည်းပြော လက်မှာလည်း မိမိ ပါးအား ဘယ်ညာဆက်ဆက် ရိုက်လိုက်သော မင်းမင်းအပြုအမူကြောင့် ကြက်သီးမွှေးညှင်းများပင် ထသွားခဲ့တော့သည် မိမိအား လူတိုင်းက ချစ်ခင်ကာ ရိုသေသမှုကို မွေးကတည်းကပင်ခံလာရသူမို့ နားထဲမှာဆန်းပြားနေသော်လည်း သူမသဘောကျသွားလေတော့သည် နှုတ်မှလည်း ထပြီးဘာလုပ်ရမှာလည်း အေးပြောမယ် အခုကုတင်ပေါ်ကဆင်းပြီး ဒူထောက်ကာ ငါ့ဘက်လှည့်စမ်းကောင်မ သူမ မငြင်းတော့ချေ သူဘာလုပ်မလည်းသိချင်စိတ်က သူမကိုလှုံ့ဆောင်နေသည် မင်းမင်းမှာ ခြေနှစ်ချောင်းတွဲလည်းချကာ ငါ့လီးလာစုပ်စမ်း ဟုပြောရင်း ဆံပင်အားနောက်မှဆွဲကိုင်ကာ သူ့လီးအား လဲ့လဲ့ ပါစပ်ထိပ်ဝတွင်တေ့ထားလိုက်တော့သည် သူမလည်းရုန်လည်းရမည် မဟုတ်မှန်းသိသောကြောင့် အသာအယာပင် ဟ ပေးလိုက်ရာ အု အု ဝူးး ဝူးး အု အု လည်ချောင်ရင်ထိပင် တိုးဝင်လာသော လီးတံကြီးကြောင့် ချွဲများသီးကာ မျက်လုံးမျာပင် ပြာဝေသွားတော့သည် မင်းမင်လည်း ဒေါသဖြစ်ကာ ကောင်မလီးကောင်းကောင်း မစုပ်တတ်ဖူးလား နင့်ညီနဲ့များကွာပါ့ ငါပြောပြမယ် သေချာနားထောင် နောက်တခါထပ်မပြောဘူးနော် နှုတ်ခမ်းကို ဝလုံးပုံစံဝိုင်းထား ပြီးရင် နင့်လျှာဖျားလေးနဲ့ ဒစ်ထိပ်က အကွဲကြောင်းလေးကို ထိုး အရင်းထိဝင်နေပြီဆို လျှာအပြားလိုက် လှည့်ပတ်ပြီးစုပ်ကြားလား မင်းမင်းလီးမှာ စုစုစောက်ဖုတ်လိုးထားတုန်းက မိမိသုတ်ရည်နှင့် ညီမစောက်ရည် များအား ရေဆေးသုတ်သင်ခြင်း မပြုလုပ်ထားရာ နှစ်မျိုးပေါင်းကာ ညှီစို့စို့အနံ့ပင်ထွက်ကာနေတော့သည် အစပိုင်းမှာ ထိုအနံက ခံရခက်ကာ တဖြေးဖြေးနှင့်စုပ်ရင်း ထိုအနံ့အားသဘောပင်ကျလာမိတော့သည် စေတနာပါပါလေး ပင် စုပ်ပေးနေမိတော့သည် အရိုင်းလေးမို့ မစုပ်တတ် စုပ်တတ် စုပ်နေသည်မှာ တမျိုးပင်ခံလို့ကောင်းလေသည် ထိုအတိုင်း ဆက်သွားနေလျှင် သူမပါစပ်ထဲမှာပင် သူပြီးတော့မှာမလွဲပင် ခနရပ်စမ်း ပြောလည်းပြောရင်း လီးအားဆွဲထုပ်လိုက်သည် ကောင်မ ထ နင့်အတွင်းခံချွတ် ပြီးရင်ကုတင်ပေါ်လေးဘက်ထောက်ပြီး ကုန်းထားစမ်း လဲ့လဲ့ မှာ လီးစုပ်ရင်းပင် တချီပြီးထားရာ မိမိ မျှော်လင့်သလို အလိုးခံရတော့မည်ဟု မှတ်ယူကာ သူခိုင်စေသည့်အတိုင်း နေပေးလိုက်တော့သည် ။
မင်းမင်းမှာ လဲ့လဲ့ တံထွေးများပေကျန်နေသော သူ့လီးအား ဖင်စအိုဝအား တေ့ကာ ခါအားနှင့်စောင့်လိုးချရာ အမေကြီးရေ…… သေပါပြီတော့… ဟု ကုန်အော်ကာ ရှေ့သို့ ဟက်လျှားထိုးပင် ပြုတ်ကျသွားပေတော့သည် ဖင်ဝအား မီးစနှင့်စောင့်ထိုးလိုက်သလို ခံစားရပြီး ကုန်းအော်လိုက်သော်လည်း ဘယ်သူမျှမကြားနိုင်ခြေ အလုံခန်းတို့၏ အားသာချက်တို့ပင်ဖြစ်သည် အဆုံးထိဝင်သွားသော လီအား ဒစ်ဖျားနာထိ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေပင်ြံပန်ထုပ်လိုက်ရာ အို…… ပလွတ် အင့်… အု.. အင့်.. အု…ဟု ကြတ်ကာ ငြီးနေသော လဲ့လဲ့အား စောင့်မြင်ကပ်ကာ ကြမ်းတမ်းစွာ လိုးစောင့်နေရင်း ဆီမပါပဲ ဖင်အား ဆက်လက်လိုးစောင့်ရာ သူလီးများပင်ပူကာ ဒစ်ဖျားများကျင်စိမ်တက်လာကာပင် ပြီးဆုံးခြင်းသို့ရောက်လေတော့သည် သူလည်းမောမောနှင့် လဲလဲ့ ဘေးမှားပင် အနားယူရင်း သူမ ပိပိလေးအား လက်ညိုးလက်ခလယ်နှင့် ပွတ်သပ်ထိုးသွင်းရင်းသူမအား ပြီးစေကာ ကာမအရသာအား မြည်းစမ်းပေးလိုက်လေတော့သည် စုစုတယောက် မနက်လင်းသော် ညောင်းကိုက်ကာ မထချင်ပေ ဝမ်းဗိုက်မှာဆာလောင်လှပြီဖြစ်ရာ မျက်လုံးအားမနည်းအာယူကာဖွင့်ရသည် မိမိအခန်းသို့ တံခါးခေါက်ရာ တော်တော်နှင့် မဖွင့်ချေ အချက်၂၀ ခန့် မရပ်မနားဆက်ခေါက်ကာမှ အိပ်မှုံစုံဝါးဖြင့် အစ်မဖြစ်သူတံခါးလာ သည် အစ်မဖြစ်သူ အိပ်ယာပေါ်တွင် အိပ်ပျော်နေသော မင်းမင်း မေးငေါ့ကာ ဘာလဲဟု မေးလိုက်ရာ နင့်လိုပဲလေဟု ပြန်ဖြေရင်း နှစ်ဦးသား သဘောကျစွာ ရီလိုက်ကြသည် ဗိုက်ဆာနေပြီ မမ မြန်မြန်လုပ် အေးပါ နင်ကလည်း ခဏတော့စောင့်ဟုပြေားရင်း ညီအစ်မ ၂ ယောက် နံနက်စာထွက်စားကြလေသည် မှယူထားသမျှအား ခေါင်းမဖော်ပဲနှင့် စားသောက်နေရင်းပြီး မိမိတို့ ဝကာမှ မင်းမင်းအတွက် ပါဆယ်ဝယ်လာခဲ့တော့သည် မင်းမင်းသည် ရေမိုးချိုးကာ ပင်ပန်းသွားသော ခန္တာကိုယ်အား ပြန်လည်အားဖြည့်ရန် အဟာရမှီဝဲရဦးမည် မဟုတ်ပါလားဟု တွေးရင်းဖြင် လေချွန်ကာ အေးအေးလူလူပင် အဝတ်လဲနေတော့သည် ဒေါက်. ဒေါက်. ဒေါက်.ဘယ်သူလည်း တဘက်မှ စုစု အသံကြားရ၍ တံခါးဖွင့်ပေးရာ လဲ့လဲ့ ပါနောက်တွင်ရပ်နေ၍ သူအံ့သြသွားသည် စိတ်ထဲမှာလည်း ဒီဆော်ကြီး အတော်ထန်တာပဲ ငါ ညက အသေဗျင်းတာတောင်မှ ခု ဘာမှမဖြစ်ခဲ့သလိုနဲ့ နေနှင့်ဦးပေါ့ကွာ ပြီးမှတွေ့မယ် ဟုစိတ်ထဲက ကြိမ်းဝါးလိုက်တော့သည် စုစု မှာသွက်လက်စွာပင် ကိုကြီးအတွက် နံနက်စာ ဝယ်လာတယ် ထွက်စားနေဖို့မလိုတော့ဘူး တယ်ဟုတ်ပါလားဟုတွေးရင်း လေညှင်းခံ ထိုင်ခုံတွင်း စားရင်း သုံးရောက်သား စကားပြောနေမိကြသည် ။
စကားပြေားနေရင်းကပင် မင်းမင်း ရင်ခွင်ထဲသို့ စုစု ဝင်လာကာ အသာပင်သိုင်းဖတ်ထားတော့သည် အစ်မရှေ့မှာပင် နို့သီးများအား ဆုပ်နယ်နေတော့သည် လဲ့လဲ့ မှာလည်း သွေးသားက တောင်းဆိုလာကာ သုံးဦးသား သူမတို့အခန်းထဲပင်ဝင်လာကြတော့သည် အခန်းတွင်းရောက်သော် တိုင်ပင်စရာ မလိုပါပဲ သုံးဦးသားပြိုင်တူပင် မိမိအဝတ်အစား မိမိဘာသာ ချွတ်နေကြသည်။ စုစုသည် အရင်ဦးစွာ ချွတ်ပြီးသောကြော ကုတင်ပေါ်သို့ တက်ကာပက်လက်လှန်ကာနေတော့သည် မင်းမင်လည်း စုစုနောက်မှပင်ပြီးကာ စုစု စောက်ဖုတ်အား လျှာနှင့်ကုန်းလျှက်နေတော့သည် နောက်ဆုံးမှ ပြီးသော လဲ့လဲ့ မှာ မင်းမင်းလီးအား စုပ်ရစေသည် သူမလည်းအားကျမခံ မင်းမင်းဂွေးဥ နှစ်လုံးကိုပါ စုပ်ယက်ပေးလိုက်သည် တစ်နေကုန်သုံးဦးသား အခန်းအောင်းကာ လွတ်လပ်စွာ လိုးပွဲဝင်နေကြသည် လိုးလိုက် နားလိုက်နှင့် အချိန်မည်မျှ ရှိသွားသည် မသိလိုက်ကြပဲ ပင်ပင်ပန်းပန်းနှင် အိပ်ပျော်သွားကြတော့သည် ညရှစ်နာရီခန်တွင် သင်္ဘောမှာ ကျောက်ဆောင်နှင့် တိုက်မိကာ တဖြေးဖြေး နစ်မြုတ်လာတော့သည် ဝန်ထမ်းများနှင့် ခရီးသည်တို့မှာ သက်ကယ်လှေများနှင့် စွန်ကာသွားကြလေသည် မင်းမင်းတို့ သုံးဦးမှာ ဘာမျှမသိလိုက်ကြသေးချေ ………. အား ကျွစ် ကျွတ် .. ဟင် ငါဘယ်ရောက်နေတာပါလိမ့် ဟု ကိုက်ခဲနေသောဦးခေါင်းအား ကိုင်ကာ ထထိုင်ရင်း ဘေးဘီအား လှည့်လည်ကြည့်ရှု့မိလိုက်သည် မိမိနောက်ဆုံး အခန်းထဲဝင်လာသောရေများအား တိုးဝှေ့ရင်း ပင်လယ်ရေများ ပါစပ် နားများအတွင်းသို့ဝင်ကာ သတိလစ်မေ့မျောသွားခဲ့ရာ အခု ငါဘယ်ရောက်နေတာလည်း ဒါဆို ငါမသေဘူးပေါ့နော်ဟု ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရင်း မှိန်ပျပျ မီးအလင်ရောင်အောက်မှာ စူးစမ်းရှာဖွေမိရာ ခြေငါးလှမ်းမျှအကွာတွင် ကျောက်စားပွဲတလုံးပေါ်၌ သစ်သီးသစ်ဥများ ရေကရောင်းတခု သစ်သားဗန်းပေါ်တွင် စားချင်စဖွယ် ငါကင်းကြီးမှာ မင်းမင်ဗိုက်အားပိုလို့ပင်ဆာလောင်လာစေသည် တွေဝေမနေတော့ပဲ ကျောက်ဖြင့်ထွင်းထုထားသော ထိုင်ခုံပေါ်တွင်ထိုင်ကာ အားရပါးရ စားသောက်လေတော့သည်။
ငါးကင်ကြီးတကောင်လုံးမျှ ကုန်သွားပြီး ရေသောက်ကာ ခွန်အားများပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးလာကာ ပတ်ဝန်းကျင်အား သတိရကာ ဘေးဘီအား လှည့်လည်ကြည့်ရှု့ရာဝယ် မိမိအား မျက်တောင်မခတ်ပဲ ကြည့်နေသောမိန်းမပျိုလေးကြောင့် လန်သွားကာ ကြက်သီးမွှေးညှင်းများပင် ထသွားလေတော့သည် သူမရပ်နေသော နေရာသည်အနည်းငယ် မှောင်နေသောကြောင်သဲကွဲစွာ မြင်ရနိုင်ရန် အရှေသို့တိုကပ်ကာကြည့်မိသည် ငါးပေခန့်အကွာတွင်တော့ သူမျက်လုံးများပွတ်ကာ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်မိတော့သည် မိန်းမပျိုလေးတွင် အပေါ်ပိုင်းဗလာကြင်းနှင့် လက်ထဲတွင်လေးအားကိုင်ကာ အသင့်အနေအထားရပ်နေသော သူမအနား တိုးကပ်ကာ မင်းဘယ်သူလည်းဟုမေးလိုက်သည် အရှင့်ကိုစောင်ရှောက်ရသူပါဟု ယဉ်ကျေးစွာပြန်လည်ဖြေဆိုလေသည် ငါ ငါ အခုဘယ်ရောက်နေတာလည်း လူစိမ်းတွေကိုထားတဲ့ အနောက်ဘက်နန်းဆောင်ပါအရှင် ဘာ နန်းဆောင်း ဟုတ်လား ဟုတ်ပါတယ် ဟားးး သူ ရယ်လိုက်သံကြောင့် မိန်းမပျိုလေးမှာ မှင်သက်စွာ ငေးကြည့်နေမိတော့သည် မိမသေချာလှည့်လည်ကြည့်ရာ နန်ဆောင်နှင့်တူတာဆိုလို့ ဘာမျှမရှိပေ သဲပြင်ပေါ်တွင် ကျောက်စားပွဲနှင့် ကုတင်ပုံစံကျောက်ပြားတချက်သာ ရှိသည် မင်းတို့ လူကြီးနဲ့ ငါစကားပြောချင်တယ် ဟု မေးလိုက်ရာဝယ် စိတ်မပူပါနဲ့အရှင် ဘုရင်မကိုယ်တိုင် တနေ့ ၂ ကြိမ်လာရောက်ကြည့်ရှု့ပါတယ် သမားတော်ကြီးများလည်း သေချာကုသပေးပါတယ် ဒါနဲ့နေပါဦး ငါ့ကိုဘာလို့အရှင်လို့ခေါ်တာလည်း ဘုရင်မက ခေါ်ရမယ်ပြောထားလို့ပါ မင်းအသားတွေ ငါကိုင်ကြည့်လို့ရမလား ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ်အရှင် ဒွိဟဖြစ်နေသောစိတ်ကြောင့် သူမအားကိုင်ကြည့်ရာဝယ် လူဟ လူပဲ ဟုစိတ်မှလက်ခံကာ ကာမစိတ်များနိုးထရင်း သူမ၏ လုံးဝန်းနေသောနို့အား ပွတ်သတ်ကာ ညှစ်ကြည့်ရာဝယ် အွန့်ဟု ငြီးသံနှင့်အတူ လက်ထဲမှလေးမှာ လွတ်ကျသွားလေတော့သည် ။
စားပါးဝနေသော မင်းမင်းမှာ ချက်ချင်းပင်သဘောပေါက်ကာ ကာမသောခလုပ်လေးများအား တခုချင်းဆီဖွင့်နေတော့သည် လုံးကျစ်နေသော နိုးအား ငုံကာစို့လိုက်ချိန်ဝယ် အိုးး အင်းး ဟင်းးး ဟု ငြီးတွားသံများပေးကာ မင်းမင်းဦးခေါင်းအား သိမ်ဖက်ထားကာ မသင့်တော်ပါဘူးအရှင်ဟု ပြောလေသည် မင်းမင်းသည်လည်း နို့စို့ပျက်မည်စိုး၍ဘာမျှမပြောပဲ သူမ၏ ဖင်အား ခပ်ဆက်ဆက် ရိုက်လိုက်ရာ မကြုံဖူးသောအထိအတွေကြောင့် စိတ်အလိုကိုလိုက်ကာ သာယာနေမိတော့သည် တခုတည်းသော နံပိုင်းငယ်အား ချွတ်ချလိုက်ကာ သဲပြင်ပေါ်သို့ပုံကျသွားသည် မင်းမင်လက်သည် သူမ၏ပိပိလေးပေါ်သို့အုပ်ကိုင်လိုက်မှ မိမိနံပိုင်းမရှိတော့မှန်းသိကာ ကုန်ကောက်လိုက်ရာ (မျက်လုံးထဲမြင်ကြည်ပေါ့ဗျာ ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သွားလဲဆိုတာ )မင်းမင်းသည် ညာခြေဖြင့်ဖိထားရာ ဆွဲမရဖြစ်နေတော့သည် ထိုအချိန်တွင် အတွင်းခံမပါပဲ ပိတ်ပါးဖြင့်သာ ခါးအားပတ်ထားသော မင်းမင်းရဲ့ လီးမှာ သူမအတွက်အထူးအဆန်းဖြစ်ကာ ကျန်လက်တဖက်ဖြင့် မကိုင်ရဲကိုင်ရဲနှင့် ပွတ်သတ်နေမိတော့သည် ခါးမှ ပိတ်စအား ဖြေချလိုက်ရာ သူမ မျက်နှာနှင့်တတန်းတည်းဖြစ်နေသော လီးအား အံသြမင်းသက်ကာ အို ဟုရေရွတ်ရင်းနှုတ်ခမ်းလေးဝိုင်းကာ ပါစပ်ဟပေးပုံဖြစ်သည်နှင့် လီးအား ပါစပ်အားတေ့လိုက်ရာ ကြောက်လန့်ပြီး ပိုပြဲအောင်ဟပေးထားကာ ဘာမှပြန်မလုပ်ပေးတတ်ပေ သူမသည် ယူးတူမှ အောကားလည်း တခါမှမကြည့်ဖူးချေ ကိုသူရိန်၏ အောစာအုပ်လည်း မဖတ်ဖူးချေ ယောက်ျားဆို၍ မင်းမင်း တယောက်သာ ပထမဦးဆုံးမြင်းဖူးခြင်းဖြစ်ရာ လီးစုပ်ရမှန်းလည်းမသိ ချေ ။
သူမတို့ ကျွန်းပေါ်တွင် မိန်းမများရှိပါသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်လိုလျှင် နတ်ရေကန်မှရေစင်သောက်သုံးလိုက်ရုံဖြင့်ကိုယ်ဝန်ရကာ အမျိုးသမီးငယ်များပင် ဖွားမြင်လာက ယောက်ျားဆိုသည်မှာ ဒဏ္ဍာရီ ထဲမှာသာ ကြားဖူးကာ ကာမဆိုသောအထိအတွေ့အရသာအား မည်သူမျှမခံစားဖူးချေ မင်းမင်းသည် သူမလက်အား ဆွဲယူကာ မိမိပါစပ်အတွင်းသီု့ထည့်ကာ လီးစုပ်ပုံအာသင်ပြပေးရာ ချက်ချင်းပင်စုပ်တတ်သွားတော့သည် ငါးမိနစ်ခန့်စုပ်စေပြီး ဆွဲထုပ်ကာ ကုတင်ပုံစံ ကျောက်ဖျာပေါ်သို့ တက်စေကာ ပက်လက်လှန်ပေါင်ကားခိုင်းထားပြီး မာတောင်နေသောမိမိ လီးအား ပိပိလေးပေါ်တင်ကာ အထက်အောက်စုန်ဆန်ပွတ်ရင်း နို့နှစ်လုံးအား အားရပါးရစုပ်နေတော့သည် အားး ရှီးး ရှီးး…. မကြုံဖူးသောထူးကဲစွာကောင်းလှသော ကာမအရသာကြောင့်မျက်လုံးမှေးစင်းကာ မိမိပြုသမျှနုနေရသောကောင်မလေးအားကြည့်ကာ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ ပိပိလေးထဲထိုးထည့်လိုက်ရာ ထိပ်ဖျားပင်အားစိုက်ထိုးထည့်ရသည် အားး ဟု တချက်တွန်ကာ မိမိရင်ဘတ်အား လက်နှစ်ဖက်လာရောက်တွန်းကန်လာသော သူမကြောင့် အဆုံးထိမထည့်ပဲ ဝင်သလောက်လေးအား ခါးလေးလှုပ်ကာ ချော့မြူးနေရင်းသူမပိပိလေးထဲမှ စောက်ရည်ကြည်လေးများမှာ မင်းမင်းလီးအားကြိုဆိုနှုတ်ဆက်လာတော့သည် မသိမသာတဖြေးဖြေးနှင့်ချော့လိုးလာလိုက်သည်မှာ အဆုံးထိပင်ဝင်လာတော့သည် အာ့ အားး အားး အု့ အင့် အားး အမျိုးမျိုးသောအသံပေါင်းစုံဖြင့် ငြီးတွားရင် လိုးစောင့်မှု့အားကြေနပ်စွာခံယူနေမိတော့သည် မင်းမင်းသည် ပထမအကြိမ်တော့ လှေကြီးထိုး ရိုးရိုးပုံစံဖြင့်လိုးရန် ဆုံးဖြတ်ကာ ခံနိုင်ရည်ရှိလာသည်နှင့် အားရပါးရ စောင့်ကာစောင့်ကာ လိုးနေမိတော့သည် တခါမျှအလိုးမခံဖူးသော သူမမှာ မင်းမင်း၏ ကျွမ်းကျင်မှုများကြောင့် လေဟာနယ်ထဲသို့ လွင့်မျောကာ အစိလေးမှာ ကျင်တက်ကာ ပြီးဆုံးခြင်း ခဏခဏ ရောက်ကာ ခံမဝဖြစ်နေတော့သည် မင်းမင်းသည်လည်း အချက်ပေါင်း ငါးဆယ်ခန့် အားရပါးရ စောင့်လို့းမှု့ကြောင့်ပင်ပန်းကာ လီးထိပ်မှာကျင်တက်ကာ ပြီး ဆုံးခြင်သို့ရောက်ရှိလာတော့သည် သုတ်ရည်များအား သူမသားအိမ်ထဲသို့ပန်းထည့်လိုက်သည် နွေးထွေးကာ ပျစ်ခဲနေသော သုတ်ရည်များကြောင့်သူမလည်း ပြီးဆုံးခြင်းအဆုံးသတ်ကာ ကောင်းကင်ပေါ်ပျံဝဲနေရာမှ မြေပြင်ပေါ်သို့ဆင်းရသကဲ့သို့ အားမလိုအားမရဖြစ်ကာ မင်းမင်းလီးအား အတွင်းသားနှင့်ညှစ်ကာညှစ်ကာ တဏှာရသကို အပြည့်အဝခံစားနေတော့သည် ။ ထို့နောက်နှစ်ဦးစလုံးမောပန်းကာ အိပ်ပျော်သွားတော့သည် မည်မျှကြာအောင်အိပ်ပျော်သွားသည်မသိ ဂူဝမှ စကားပြောသံများကြောင့် လန့်နိုးလာတော့သည် အဲ့အလယ်က မာမာအချောင်းကြီးပါ အရှင်မ သူကသိပ်ပြီးထူးကဲတဲ့အရသာကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ် လောကကြီးထဲက အကောင်းဆုံးသောအရသာထက် ပိုမိုများပြားစွာသာလွန်ပါတယ် အရှင်မ ကျွန်တော်မျိုးမကိုယ်တိုင် ကိုယ်တွေ့ပါဘုရား ပြောလည်းပြော လက်နှင့်ဆုပ်ကိုင်ကာ ပြနေသော သူမကြောင့် ဘုရင်မနှင့်တကွ ဘေးတွင်ပါလာသောမိန်းမပျိုများမှာ အဖုတ်တွင်းမှ တစစ်စစ်နှင့် စောက်ရည်ကြည်များ ယိုစိမ့်လာလေတော့သည် ……… ပြီးပါပြီ။